कतै पर्सलाई पछाडि त राख्नुहुन्न ? लाग्नसक्छ यस्ता चार रोग | कतै पर्सलाई पछाडि त राख्नुहुन्न ? लाग्नसक्छ यस्ता चार रोग – हिपमत
कतै पर्सलाई पछाडि त राख्नुहुन्न ? लाग्नसक्छ यस्ता चार रोग
काठमाडौं,पौष १६ :पर्सलाई धेरैजसो मानिसले आफ्नो पछाडिको खल्तीमा राख्ने गर्दछन् । यदि तपाईं पनि यस्तै गर्नुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो यो बानी तुरुन्तै हटाउनु पर्नेछ नभए विभिन्न रोगको शिकार हुनुपर्छ । पर्समा हामी पैसाको साटो विभिन्न कार्ड, सिक्का, आइडीलगायतका वस्तु राख्छौं जसले पर्स निकै मोटो बनाउँछ । यस्तोमा यदि तपाईंले पछाडिको खल्तीमा यस्ता मोटो पर्स राख्नुहुन्छ भने यसले तपाईंको शरिरको तल्लो भागको ब्यालेन्स बिगार्ने गर्दछ । त्यसकारण पछाडिको खल्तीमा पर्स राख्दा तपाईंले विभिन्न स्वास्थ्य समस्या झेल्नुपर्छ ।